प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : प्रचण्डले ‘सूर्य चुनाव चिन्ह मेरो’ भन्दा तपाईंहरुलाई हाँसो लागेन? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रधानमन्त्रीको प्रश्न : प्रचण्डले ‘सूर्य चुनाव चिन्ह मेरो’ भन्दा तपाईंहरुलाई हाँसो लागेन?
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : प्रचण्डले ‘सूर्य चुनाव चिन्ह मेरो’ भन्दा तपाईंहरुलाई हाँसो लागेन?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूले नेतृत्व गरेको दलको नै हुने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै एकपटक पनि सूर्य चुनाव चिन्हमा चुनाव नलडेका प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेकोमा आश्चार्य प्रकट गर्नुभयो । ‘प्रचण्डले ‘सूर्य चुनाव चिन्ह मेरो’ भन्दा तपाईंहरुलाई हाँसो लागेन,’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो ।